အက်စတိုးနီးယားရှိ OU ကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC
အက်စတိုးနီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းကဲ့သို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်။
Million Makers Estonia သည်အက်စတိုးနီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုဖောက်သည်များအားပေးသည်။
အက်စ်တိုးနီးယားမှကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားမှကမ်းလွန်ဒေသများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အက်စတိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိရိယာများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပို့ခြင်း။
သင်၏အက်စတိုးနီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
အက်စတိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် Virtual နံပါတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် CRM Solutions၊ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် virtual ရုံး၊ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးနှင့် 109 နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
သင်၏ Estonian OU အမည်ကိုရှာပါ
အက်စတိုးနီးယားသည်အစီရင်ခံစာအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအင်အားစုများဖြင့်လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၁၉၄၀ တွင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ပေါင်းစည်းထားသည့်သမ္မတနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ အက်စ်တိုးနီးယားသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်အထိဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးဆန့်ကျင်ဘက်ဘောလ်တစ်ပြည်နယ်များနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင်အက်စ်တိုးနီးယားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဘောလ်တစ်ပြည်နယ်များအတွက်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး၊ အက်စတိုးနီးယားသည်၎င်း၏ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစု၏အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးစီးပွားရေးကိုစျေးကွက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောအလုပ်ရှင်ဆီသို့ ဦး တည်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုထင်ရှားသောဥရောပနှင့်ရောနှောနေခြင်းကိုရှာ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ (နေတိုး) နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) တို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
အက်စ်တိုးနီးယားရဲ့ ဦး စားပေး
အနောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်သို့သယ်ဆောင်လာသည့်အက်စတိုးနီးယား၏နိုင်ငံတကာ,ရိယာ၊ ယင်း၏အနိမ့်ဆုံး၊ မဟာဗျူဟာမြောက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ရှည်လျားသောပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုပေးသည်။
အခြေခံကျကျကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကကျွန်ုပ်တို့တွင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်ဈေးကွက်မရှိကြောင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ အဆိုပါသင်တန်းသည်မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ အက်စတိုးနီးယားသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် (ဥပမာ Skype၊ Ericsson, ABB နှင့်စသည်တို့) အတွက်အရေးပါသောအလှည့်အပြောင်းများနှင့်ဖန်တီးမှုအဆင့်ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ၏အစွန်အဖျားအခြေအနေတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှေ့ - အနောက်ပိုင်းရှိကုန်ပစ္စည်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအားထိရောက်စွာရွေ့လျားစေနိုင်သည့်နက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲထားသောတွက်ချက်ထားသောအခြေခံအုတ်မြစ်များထပ်မံရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်စျေးကွက်နိမ့်ကျနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက် ၀ င်များကိုအာမခံချက်အတုများချက်ချင်းမလိုအပ်ပါ။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ဘဏ္specialistsာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအသစ်များနှင့်ပြင်ပကြံရာပါများအားလုံးသည်ဤတွင်အချိန်အတော်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသောစီးပွားရေးအမြော်အမြင်ရှိသူများကဲ့သို့ပင်ဤကဲ့သို့သောကြိုဆိုမှုကိုရရှိကြသည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်း၊ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များ၊ ယူရိုဇုန်နှင့်နေရာတစ်နေရာရှိခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုစာရင်းနိမ့်သောပြည်သူ့တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ရိုးရှင်းမှု - စသည်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ထိုက်တန်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခွန်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာမူဘောင်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကြိုတင်တွေးခေါ်နိုင်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူစေသည်။
အက်စတိုးနီးယားသည်အလားတူသိသာထင်ရှားသောကျောင်းပညာရေးနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်များရှိသောတောက်ပသောပုဂ္ဂိုလ်များကသိမ်းပိုက်ထားသည်။ ၁၇ ရာစုမှစပြီးအက်စတိုးနီးယားသည်ဥရောပအလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ပိုင်းတွင်ပုံမှန်ကျောင်းတက်နိုင်မှုအတွက်အထူးခြားဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
အက်စတိုးနီးယားသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ Estonian တွေဟာစကားမပြောကြသေးပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကတိက ၀ တ်တွေကိုသစ္စာစောင့်သိပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်၊ ဒီမြေကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပိုက်ထားခဲ့တဲ့အနှစ် ၁၀၀၀၀ ကျော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကနေစတင်တာပါ။ အက်စတိုးနီးယားသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းတေးသီချင်းများလည်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ တိုးတက်မှုများအားလုံးကိုအမြန်နှင့်ထိရောက်စွာအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်ကိုအချိန်ကပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြောင်းအလဲကိုခေါင်းစဉ်တပ်ထားသူများဖြစ်သည်။
အက်စတိုးနီးယားကိုအခြေခံနှင့်ပတ်သက်သောစွမ်းရည်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကိုပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်အလက်နှင့်စာပေးစာယူဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့ဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မူဘောင်များသည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြန်၊ အထောက်အကူနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အင်တာနက်အကြောင်းသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါက်ဘော်များ၏ရုတ်တရက်ဆုတ်ခွာထားသောသဘောသဘာဝကိုညှိနှိုင်းသည့်အကျိုးရှိသည့်မူဘောင်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် (ဒေတာ) ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအသုံးချနိုင်သည်။ အပြင်ဘက်နှင်းနှင်းမုန်တိုင်းကျရောက်သောအခါအိမ်နီးချင်းနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်မတူဘဲ Skype သည်လျောက်ပတ်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ID-card သည်အနီးဆုံးဘဏ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များနှင့်ကီလိုမီတာကွာဝေးသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဘဏ်နှင့်ပြည်နယ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အက်စ်တိုးနီးယားသည်အစစထင်ပေါ်နေသည့်နိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေတိုးနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အိုင်တီ - အဖွဲ့အစည်းတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ကာကွယ်ရေးအာရုံစိုက်မှုနှင့်တစ် ဦး ချင်းလူ ဦး ရေ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဝဘ်။
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယား၊ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်အက်စတိုးနီးယားသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင်ဘဏ်လုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
အက်စတိုးနီးယားရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းအဆုံးသတ်ရန်နှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်ကူညီခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိ virtual ရုံးခွဲ၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူမှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးနံပါတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိစီးပွားရေးအကဲဖြတ်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိ CRM Solutions၊ ကြောင့်အက်စ်တိုးနီးယားတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်စတိုးနီးယားရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်စတိုးနီးယားရှိအက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် အက်စတိုးနီးယားနှင့် Offshore ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့်အက်စတိုးနီးယားမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံမှအဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်။ အက်စတိုးနီးယားရှိသင်၏အလုပ်နေရာများသို့ဖြည့်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ဝယ်ယူမှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိ virtual နံပါတ်များ၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အက်စတိုးနီးယားရှိစီးပွားရေးအတွက်တန်ဖိုးဖြတ်မှု၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အက်စတိုးနီးယားရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စက်ပစ္စည်းများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိလည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးငွေကြေး၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုရှိခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ အက်စတိုးနီးယားရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်စတိုးနီးယားရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်စတိုးနီးယားရှိအက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုမှအက်စ်တိုးနီးယားအတွက် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စျေးနှုန်းများ။
အက်စ်တိုးနီးယားရှိ OU အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာအက်စတိုးနီးယားနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE အက်စတိုးနီးယားအတွက်အဖြေတစ်ခုပေးပါသည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း အက်စ်တိုးနီးယား (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း အက်စ်တိုးနီးယား (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း အက်စ်တိုးနီးယား
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း အက်စ်တိုးနီးယား
အက်စ်တိုးနီးယားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account Estonia / Payment Gateway Estonia
အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
အက်စတိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်အက်ပဲနီးယားစီးပွားရေးအတွက် Chop and Seal
အက်စ်တိုးနီးယားတွင် OU အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● OU Estonia (၁ နှစ်) အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကြေး - ဒေါ်လာ ၅၆၉
●အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၆၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ အက်စ်တိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီ TYPE ၁ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●အက်စ်တိုးနီးယားတွင် OU အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●အက်စ်တိုးနီးယားတွင် OU အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ရမည်
●အက်စတိုးနီးယားရှိ OU အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးရမည်
●အက်စတိုးနီးယားရှိ OU အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့မှု
●အက်စတိုးနီးယားရှိ OU အတွက်သင့်အတွက်သင့်တော်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်။ အဲဒီမှာအသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊
အက်စတိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင်သည်အက်စတိုးနီးယားသို့မဟုတ် ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
OU Estonian အတွက်ကုန်သည်အကောင့်
အက်စတိုးနီးယားရှိ OU အတွက်အမည်ခံဒါရိုက်တာ
OU Estonia အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
OU အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
OU အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ အက်စတိုးနီးယားတွင် Million Makers မှတဆင့်ဖြစ်သည်
အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းပြီးဘက်မလိုက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။ အက်စတိုးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များသည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသည်။ အက်စတိုးနီးယားအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်နှင့်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်ဖောက်သည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့်၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အက်စတိုးနီးယားမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည် အက်စတိုးနီးယား၊ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအက်စတိုးနီးယားတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်နှင့်သင်တို့၏မိသားစုအတွက်အက်စတိုးနီးယားအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကအက်စ်တိုးနီးယားအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သည့်အကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ အဘို့ အက်စ်တိုးနီးယားနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
အက်စတိုးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ အက်စ်တိုးနီးယား ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယား.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယား၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အက်စတိုးနီးယားတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ အက်စတိုးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံတို့နှင့်သင်၏အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုအရေးကြီးသည်။
အက်စတိုးနီးယားရှိ OU မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ - အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုအက်စတိုးနီးယားအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ပင်လျှင်မပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးသတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အက်စတိုးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အက်စတိုးနီးယားရှိ OU အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အက်စ်တိုးနီးယားရှိ LLC တွင်
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
အက်စ်တိုးနီးယားရှိအက်စ်တိုးနီးယားရှိ LLC အတွက် OU အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
အက်စတိုးနီးယားရှိ OU အတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိ LLC အတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏စာအုပ်။
အက်စတိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအက်စတိုးနီးယား၊ LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော OU အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
အက်စ်တိုးနီးယားရှိအက်စတိုးနီးယားရှိ LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါလျှင်, OU အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် LLC / အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် LLC ။
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အက်စတိုးနီးယားရှိ LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ အက်စ်တိုးနီးယားရှိ OU / အက်စ်တိုးနီးယားရှိ LLC:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: အကယ်၍ သင်သည်အက်စတိုးနီးယားတွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မပါဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုချက်ရသည့်အက်စတိုးနီးယားတွင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers ရှိကျွန်ုပ်တို့အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအထောက်အကူမပြုနိုင်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိကုန်ပစ္စည်းအခြေခံသည့်အနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်လဲလှယ်, အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုံခြုံချုပ်နှောင်ထားန်ဆောင်မှု။
အက်စတိုးနီးယားရှိ Crytocurrency လိုင်စင်ကိုလိုင်စင်ချပေးရန်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိလောင်းကစားလောင်းကစားခွင့်ပြုခြင်းအတွက်လိုင်စင်ရယူရန်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
အက်စတိုးနီးယားနှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းပေါင်းများစွာသောအက်စတိုးနီးယားသို့တိုက်ရိုက်တည်ထောင်သူများနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများဖြင့်အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့ရှိဖောက်သည်များအားကူညီသည်။
အက်စတိုးနီးယားရှိ Corporate Services | Tallinn ရှိ Corporate Services | Tartu ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု
အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိအက်စ်တိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်
အက်စတိုးနီးယားရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ | Tallinn ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Tartu ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ
အက်စတိုးနီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် အက်စ်တိုးနီးယား.
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအက်စတိုးနီးယားတွင်သင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို အက်စ်တိုးနီးယားမှာ။
HR အတိုင်ပင်ခံ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်သင်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုဝန်ထုတ်။ အက်စတိုးနီးယားတွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့်အက်စတိုးနီးယားနှင့်အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း 107 "ဟုလည်းလူသိများ"အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းအက်စ်တိုးနီးယားတွင်
အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ အက်စ်တိုးနီးယား.
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားမှ။
အက်စ်တိုးနီးယားရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ အက်စတိုးနီးယားရှိအခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင်သင်၏ဝယ်ယူသူဆက်သွယ်ရေးနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိအထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် အက်စတိုးနီးယားရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်အက်စ်တိုးနီးယားရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းမှုများအက်စ်တိုးနီးယားရှိလူနေအိမ် VoIP အပါအဝင်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်အက်စတိုးနီးယားမှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း အက်စ်တိုးနီးယား အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်၊ $ 100 နှင့်အတူစတင်
အက်စတိုးနီးယားရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အက်စ်တိုးနီးယား, အက်စတိုးနီးယားရှိ CryptoCurrency Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
အက်စတိုးနီးယားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော software ကိုထုတ်လုပ်သည် အက်စတိုးနီးယားရှိစျေးသက်သာသောစီးပွားကူးသန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်အက်စ်တိုးနီးယားလုပ်ငန်းစဉ်များအလျင်အမြန်လိုက်နာရန်ရှာဖွေနေသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိသည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအဘယ်အရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီမည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အက်စတိုးနီးယားတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
အက်စတိုးနီးယားရှိ OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားတွင် OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားတွင် OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကမ်းလွန် OU ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကမ်းလွန် OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကမ်းလွန် OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , အက်စ်တိုးနီးယား OU ဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယား OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသမုဒ္ဒရာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် OU ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အက်စတိုးနီးယားတွင် OU ပါ ၀ င်မှုအတွက်ပံ့ပိုးမှု | အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း | အက်စတိုးနီးယားတွင်OÜပေါင်းစည်းခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း | အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC တည်ထောင်သောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းထောက်ခံသည်။ အက်စတိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အခြေစိုက်သော LLC တည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အခြေစိုက်သောအက်စ်တိုးနီးယား LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , အက်စ်တိုးနီးယား LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယား LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယား LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိOÜဖွဲ့စည်းမှုရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းထောက်ခံသည်။ အက်စတိုးနီးယားတွင်OÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်OÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်OÜဖွဲ့စည်းမှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရှိသောOÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကမ်းလွန်OÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , အက်စတိုးနီးယားOÜဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယားOÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယားOÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်OÜဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်OÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ဖွဲ့စည်းမှုရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းထောက်ခံသည်။ အက်စတိုးနီးယားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , အက်စ်တိုးနီးယား IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယား IBC မှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယား IBC မှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိ LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ အက်စတိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော LLC ကုမ္ပဏီအက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အခြေစိုက်သောကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်တည်ထောင်သောကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီ၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်တရားဝင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအက်စ်တိုးနီးယား LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယား LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ အက်စတိုးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အိုင်စီတီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှု, အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုအက်စတိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
OU ကိုအက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ရန် OÜကိုအက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကိုအက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် အက်စ်တိုးနီးယားရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားမှကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စတိုးနီးယားမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အထောက်အပံ့များမှာ - Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Tallinn တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Tallinn မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Tallinn မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Tallinn မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Tartu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Tartu မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Tartu မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Tartu မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Tartu မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Tallinn တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Tartu တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းသည်အက်စတိုးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များမှအကူအညီဖြင့်အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှအောင်မြင်မှုရရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့ကြီးများရှိ Tallinn ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၊ Tallinn ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Tallinn ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၊ Tallinn ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Tallinn ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Tartu ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Tartu ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Tartu ရှိ Tartu ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ Tartu ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Tartu ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Tallinn တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Tartu တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
အက်စတိုးနီးယားရှိတတ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းလူသိများတဲ့အက်စတိုးနီးယားမှာအနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါတယ်။ Tallinn ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Tallinn ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Tallinn ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Tallinn ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Tartu ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Tartu မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တာတူးမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ တာတူးရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Tallinn တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Tartu တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Tallinn တွင် Tallinn ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ၊ Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ၊ Tallinn တွင် setup ကုမ္ပဏီ Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်မည်၊ Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Tartu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Tartu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့် Tartu ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန် Tartu, Tartu တွင် setup ကုမ္ပဏီ, Tartu အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်, Tartu အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်။
အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ တိုလင်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Tartu တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအဝင်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နိုင်ငံခြားသားအားမြို့တော်၌လည်းကောင်း၊ Tallinn တွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အပါအဝင် - Tallinn တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Tallinn တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Tartu တွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Tartu ရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Tartu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအက်စတိုးနီးယား ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Tallinn | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများတာတူး
အက်စတိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ကြေးကုန်ကျစရိတ်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှုအက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ကြေးစရိတ်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်။ ဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ်အက်စ်တိုးနီးယားမှာကုမ္ပဏီကုန်ကျစရိတ်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်။
အက်စတိုးနီးယားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး | စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတာတူးမြို့
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့) အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအား Tallinn တွင်ထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတာတူးတွင်ထည့်သွင်းပါ
အက်စတိုးနီးယားတွင် OU မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း အက်စတိုးနီးယားတွင်OÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဟုတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နေထိုင်သူများကိုအက်စတိုးနီးယားတွင် OU ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်ရှိသောကမ်းလွန် OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားတွင် OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိ OU ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံရှိ OU ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားကမ်းလွန် OU ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် OU မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , အက်စတိုးနီးယားတွင်ကမ်းလွန် OU ပါဝင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အက်စ်တိုးနီးယားတွင် OU ပါ ၀ င်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် OU ပါဝင်ခြင်းနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသားများသာမကအက်စ်တိုးနီးယား LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူအက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC၊ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အခြေစိုက်သောအက်စ်တိုးနီးယား LLC မှဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အခြေစိုက်သောအက်စ်တိုးနီးယား LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်တည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယား၊ OÜအက်စတိုးနီးယားတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံOÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်OÜဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်OÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိ Osh ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်OÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်OÜမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်OÜမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသားများနှင့်အတူနေထိုင်သူများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသားမဟုတ်သူများ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ အက်စ်တိုးနီးယားအိုင်ဘီဘီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယား IBC ပေါင်းစည်းမှု၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီခွဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကုမ္ပဏီ၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယား LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယား LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားအခြေစိုက်အက်စ်တိုးနီးယားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအက်စ်တိုးနီးယားတွင်တည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယား LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသားမဟုတ်သူများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရှိသောအိုင်စီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအက်စ်တိုးနီးယားအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်အိုင်ဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရှိသော IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရှိသော IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံသားများသာမကအက်စ်တိုးနီးယားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း , အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။
OU ကိုအက်စ်တိုးနီးယားတွင်ထည့်သွင်းပါ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် LLC Incorporate OÜကိုအက်စ်တိုးနီးယားတွင်ထည့်သွင်းပါ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် IBC ထည့်သွင်းပါ အက်စတိုးနီးယားရှိ Incorporate LLC ကုမ္ပဏီ အက်စ်တိုးနီးယားရှိ IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး
အက်စတိုးနီးယားရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ အက်စ်တိုးနီးယားရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအက်စတိုးနီးယားတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်သုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းများခြင်းနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်လူသိများသောအက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ အက်စတိုးနီးယားတွင်ရှိပြီးအက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံကိုသင့်အားအက်စတိုးနီးယားတွင်စျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုအထူးကူညီပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ Tallinn တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တာတူးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအက်စ်တိုးနီးယားမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ အက်စတိုးနီးယားတွင်လည်းအလားတူပင် Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Tallinn တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Tallinn, Tartu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်, Tartu အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Tartu အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် Tartu အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်, ဒါမှမဟုတ်, Tartu အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်, Tartu အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်, Tartu အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်။
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Tallinn တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Tartu တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Eesti Vabariigi Presidendi Kantseleiအက်စ်တိုးနီးယား၏ Precidency ၏ရုံး။
Esti Välisministeerium- နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန။
အက်စ်တိုးနီးယား - ခရီးသွားလာရေးနှင့် Tour ည့်လမ်းညွှန်များ
တီဗီ / ရေဒီယို
Baltic သတင်းဝန်ဆောင်မှု (BNS)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် - အက်စ်တိုးနီးယား
World Factbook - အက်စ်တိုးနီးယား
ဘီစီဘီစီနိုင်ငံ - အက်စတိုးနီးယား
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - အက်စ်တိုးနီးယား
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - အက်စ်တိုးနီးယား
နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များ - အက်စ်တိုးနီးယား
Citadele banka Eesti filial AS www.citadele.ee
LHV ပန့်ခ် AS www.lhv.ee
SEB Pank အဖြစ် www.seb.ee
ASop pank Coop www.cooppank.ee
Luminor ဘဏ် AS www.luminor.ee
TBB pank AS www.tbb.ee
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အက်စတိုးနီးယားရှိငွေကြေးခဝါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ အက်စ်တိုးနီးယား အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●အက်စတိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများအားလက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) အက်စတိုးနီးယားသို့ (သို့) မှစက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်ယန္တရားထောက်လှမ်းခြင်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမထားဘူး။
●အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအက်စ်တိုးနီးယားဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမဝင်၊
●အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံမှ (သို့) မှမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အက်စတိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပေးအပ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အက်စတိုးနီးယားမှာရှိတဲ့နျူကလီးယားပစ္စည်းတွေမှာသုံးတဲ့စက်ယန္တရားနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●အက်စတိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူ၊ တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုအက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံမှကုန်စည်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၊
●အက်စတိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) အက်စတိုးနီးယားမှ (သို့) သို့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အက်စ်တိုးနီးယားသို့ (သို့) သို့ ၀ င်ရောက်သောဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
●အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုအက်စတိုးနီးယားရှိတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောသို့မဟုတ်အက်စတိုးနီးယားရှိသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဟာမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အက်စတိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်အက်စတိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် အက်စ်တိုးနီးယားတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် အက်စ်တိုးနီးယား, အက်စ်တိုးနီးယား ဘဏ်အကောင့်, အက်စ်တိုးနီးယား ယုံကြည်မှု အက်စ်တိုးနီးယား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု အက်စ်တိုးနီးယား။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ အက်စ်တိုးနီးယားအဘို့
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-estonia/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-estonia/
Browser သည် GTranslate-Translation-Proxy ဖြစ်သည်